Fishing Equipment, Fishing Rod Processing Machine, Angling Test Machine - Tonglian
Ane nyanzvi kugadzira chikwata, pamwe itsva zvigadzirwa, yokuisvonaka uye vanotengesa rebasa pfungwa.
With chigadzirwa unhu yakavimbika uye vepachokwadi basa mukurumbira, vava kupfuura nounyanzvi mutungamiri indasitiri.
Installation: isu achatuma wevanamakanika kuti asunungure pasi-panzvimbo chokugadza debugging midziyo uye kudzidzisa vashandi.
Weihai midziyo hove Tonglian fekitari, iri munzvimbo yakaisvonaka romumhenderekedzo yegungwa guta - Shandong dunhu Weihai City Village Industrial Zone, kushandisa kugadzirwa hove, gorofu kugadzira midziyo, uye anobudirira kuwedzera kukura huru dhayamita girazi chubhu, dzimwe indasitiri kabhoni chubhu vhoriyamu munda kuumbwa michina.
Large dhayamita nenyere pakuonekwa uye kuzvicheka muchina